Soomaali la xukumay lacag magdhow kadib markii ay diiday inay xamaalaan Qamri – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Soomaali la xukumay lacag magdhow kadib markii ay diiday inay xamaalaan Qamri
by admin 31st October 2015 058
Maxkamada dalka Maraykanka ayaa lacag mag-dhaw ah oo gaareysa $240,000 u xukuntay labo nin oo Soomaali ah oo shaqadoodii looga eryey kadib markii ay diideen inay qaadaan Khamrada.
Labadan nin oo lagu kala magacaabo Mahad Cabaas Mohamed iyo Abdikarim Hassan Bulshale ayaa u shaqeenayey shirkada Xamuulka ee (Star Transport Inc), waxaana shaqada laga eryey sanadkii 2009, kadib markii ay diideen inay Khamrada ku qaadaan gaadiidka xamuulka ee shirkadaasi oo ay darawalada ka ahaayeen.
Raggan Soomaalida ah ayaa ku dooday in diintooda Islaamka u diiday inay ka shaqeeyaan Khamriga, sidaas darteedna aysan qaadi doonin dhamaan xamuulka Khamriga ah, shirkada Star Transport ayaa lagu eedeeyey inaysan fursad kale siin raggan shaqaalaha u ah balse shaqadii laga joojiyey labadan nin.
Qareenada u doodayey raggan ayaa sheegay in Shirkada Xamuulka ay heysatay fursad ay raggan ugu bedali kareen inay gaadiidkooda ku qaadaan Xamuul kale oo aan Khamri ahayn iyagoo dhowraya diinta raggan, balse shirkadaasi go’aansatay inay muslimiintan ku cunsiriyeyso diintooda oo ay shaqada ka joojiso, taasi oo si toos ah uga horimaaneysa Dastuurka dalka Maraykanka oo danbi ka dhigaya in dadka lagu cunsuriyeeyo diintooda.
Dacwada u dhaxeysa shirkada Star Transport INC iyo raggan ayaa soo socotay tan iyo sanadkii 2013, waxayna shirkadaasi intii ay dacwada socotay qiratay in maamulkeeda shaqaalaha ay ku dhaqaaqeen falal khaldan oo ay ku deg degeen shaqo ka fariisinta daraweladan Soomaalida ah.
Guddi xeer-beegto ah oo Maxkamada u saartay dacwadan ayaa go’aamiyey in lacagta mag-dhawda lagu xukumo shirkadan inay siiso raggaasi shaqada laga joojiyey.
Banaanbax ka dhacay Beledweyne looga soo horjeedo guddiga farsamada maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe+ sawiro
Daawo: Maxaadan ogeyn oo madaxweyne ku xigeenka 2-aad ee jubbaland uu kismaayo ka furay?
VIDEO: Eng Yariisow,Wasiir Isloow iyo Taliyeyaasha Ciidamadda oo hal arin isku baheystay